Mareykanka oo Duqeeyay Machad Lagu Barto Diinta Islaamka oo Ku Yaalla Suuriya. (Bayaan) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Jul 2, 2019 2,985 0
Masjid uu Maraykanku horey ugu burburiyay Suuriya.
Diyaaradaha dowladda Maraykanka ayaa duqeeyay xarunta machad sharci ah oo lagu barto diinta Islaamka, kuna taalla gobolka Xalab ee Suuriya.
Jamaacada islaamiga ah ee Xuraasu-diin ayaa bayaan kasoo saartay dhacdadan waxayna sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mic cadawtooyo uu uu Mareykanku kaga soo hor jeedo islaamka iyo muslimiinta.
Mareykanka ayaa waxa uu duqeynta ku dilay qaar kamid ah dadkii cilmiga ku baranayay machadka sharciga ah.
Isbaheysiga ay hogaamineyso dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in machadka sharciga ah ee uu beegsaday lagu tababarayay rag loo diyaarinayay ney fuliyaan howlgallo ka dhaca meel ka baxsan Suuriya, waana arinka ay sida cad u beenisay Xurraasu-diin.
Jamaacada Xuraasu-diin ayaa kula talisay muslimiinta Suuriya iyo xataa dagaal yahanadeeda iney feejignaan sameeyaan midnimada dhexdoodana ku dadaalaan.
Maraykanka ayaa dhowr jeer oo hore, wuxuu duqeymo aan kala sooc lahayn ka geystay dalka Suuriya, kuwaas oo ay ku wax yeeloobeen dad maati ah, waxaana kamid ahaa duqeyn uu la beegsaday masjidka Cumar Binul Khadhaab ee gobolka Xalab oo uu ku dilay ku dhawaad 50 qof oo xilligaas salaadda cishaha ku jiray.
Soomaaliya iyo Afqaanistaan ayaa kamid ah meelaha uu Maraykanku ka geysto duqeymaha ka dhanka ah marrasta isagoona ku tilmaama iney dagaalyahanno ahaayeen.
Hey’adaha sheegta xuquuqda aadanaha ayaanan iyagu ka hadal inta badan dhibaatooyinka uu Mareykanku u geysto dadka abriyada ee Muslimiinta ah iyadoo aad arkeyso iney maalmo badan qaadaadhigaan markii ay weeraro ka dhacaan wadamada reer galbeedka ama kuwa kale ee aan muslimka ahayn.